ညာဘက် vs left: ဦးနှောက်လေ့ကျင့်ရေး APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » ဦးနှောက်လေ့ကျင့်ရေးငျ: Right vs Left
ဦးနှောက်လေ့ကျင့်ရေး APK ကိုငျ: Right vs Left
ညာဘက် vs လက်ဝဲနှင့်အတူနေ့စဉ်နေ့တိုင်းသင့်ရဲ့မီးခိုးရောင်ကိစ္စလေ့ကျင့်ခန်း! ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းများကိုကျိုးကြောင်းဆင်ခြင် Precision, adapter, reflex, သင့်ပွားစမ်းသပ်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနှင့်ညာဘက် vs Patience.Left 49 စုစုပေါင်းဂိမ်းကြောင်းစမ်းသပ်မှုများပါဝင်သည်နှင့်6အမျိုးအစားတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောအတွက်သင့်ဦးနှောက်ကိုလေ့ကျင့်နေကြသည်။
ညာဘက် vs လက်ဝဲ Mode ကို Colorblind ခဲ့သည်! ကိုယ့် app ကိုဖွင့် setting များကို menu ကထဲမှာကိုသက်ဝင်။
VIP အဖွဲ့ဝင်များကနေ့တိုင်းအားလုံး6လေ့ကျင့်ရေးအမျိုးအစားလေ့ကျင့်ပေးနိုင်သည်။ သူတို့အားအမျိုးအစားကနေအားလုံးဂိမ်းများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ သငျသညျဒါ့အပြင်နေ့ရက်တိုင်းတစ်ဦးချင်းစီဂိမ်းအကြိမ်အနေနဲ့န့်အသတ်ငွေပမာဏကိုကစားလေ့ကျင့်ပေးနိုင်သည်။ သာ VIP အဖွဲ့ဝင်များကလည်းတစ်ဦးချင်းစီဂိမ်းအမျိုးအစားနှောက်လဒ်, အမျိုးအစား percentile, သင်၏ရမှတ်သမိုင်းတွေ့နိုင်ပါသည်။
ပုံမှန်အဖွဲ့ဝင်များအခမဲ့နေ့ရက်တိုင်း3အမျိုးအစားထဲကလေ့ကျင့်ရေး6ထွက်စတင်နိုင်ပါသည်။ လိမ့်မည်ရရှိနိုင်သူတို့အားအမျိုးအစားထဲကနေမှသာလျှင်ပုံမှန်ဂိမ်းများကို။ ထို့အပြင်သငျသညျအတိုဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးနောက်အခမဲ့ (VIP ဂိမ်းအပါအဝင်) နောက်ဆုံး3နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ရေးဂိမ်းများကိုဖြည့်စွက်ပေးနိုင်သည်။ သင်တို့သည်လည်းတိုကင်ကိုအသုံးပြုပြီးတစ်ဦးချင်းစီဂိမ်းကစားနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်ဂိမ်း 1 လက္ခဏာသက်သေကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ VIP ဂိမ်း3တိုကင်ကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ အပိုဆောင်းတိုကင်တစ်ခုသာဗွီဒီယိုအတိုကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်ရရှိခဲ့သည်နိုင်ပါသည်။
စာရင်းပေးသွင်းထားမှုများ4အမျိုးအစားများကိုတဦးနှင့်အတူသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုအဆင့်မြှင့်က VIP အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာရန်:
- အခမဲ့စမ်းသပ်* / အပတ် Pass ကို: $ 0.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
- လစဉ် VIP Subscription: $ 1.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
- နှစ်အလိုက် VIP Subscription: $ 5.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
- တစ်သက်တာ VIP Pass ကို: $ 9.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
စျေးနှုန်းများသည်သင်၏တိုင်းပြည်နှင့်ဒေသခံငွေကြေးအပေါ် မူတည်. ကွဲပြားပါလိမ့်မယ်။
(* ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ: အဆိုပါအခမဲ့အစမ်းသငျသညျအခမဲ့များအတွက်ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်ကမ်းလှမ်းတဲ့အပတ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်အပတ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းသက်တမ်းတိုးဖို့မရွေးချယ်ပါကသင်ကဒုတိယအပတ်ကရှေ့တော်၌ထိုအပတ်စဉ်စာရင်းသွင်းမှုကိုပယ်ဖျက်ရပါမည်။ )
ကစားဘို့ဤမျှလောက် Thank you!
lvrbrain အားဖြင့် tweets
ညာဘက် vs လက်ဝဲသင့်ရဲ့ဗွီဒီယိုကြော်ငြာအတွေ့အကြုံကိုအိပ်ရေးဝြခင်းနှင့်မြှင့်တင်ရန်ဖတ်ပါနှင့်သင့်ပြင်ပသိုလှောင်ရေးခွင့်ပြုချက်တောင်းဆို။ ဤရွေ့ကားခွင့်ပြုချက်သာ6ထက်အစောပိုင်းကအန်းဒရွိုက်ဗားရှင်းများသက်ဆိုင်ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ကို Android6သို့မဟုတ်ဘို့, သင်ဆဲသင်တို့သည်ဤခွင့်ပြုချက်ကျဆင်းလျှင်ပင်ဂိမ်းကစားနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်အကောင့်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါဗွီဒီယိုကြော်ငြာများပြသလျက်ရှိသည်။ သူတို့ဟာ LvR များ၏ထုတ်လုပ်မှုရန်ပုံငွေကူညီဒါကြောင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏ထောက်ခံမှုတန်ဖိုးထားတယ်။ သငျသညျခွင့်ပြုချက်နှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါက hello@lvrbrain.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ကျနော်တို့အနေနဲ့ကြောက်မက်ဘွယ် update ကို ... Colorblind mode ကိုရှိ !!!
တချို့ကဂိမ်း Colorblind mode မှာလမ်းကပိုပျော်စရာများနှင့်စိန်ခေါ်မှုများမှာ!
ငါတို့သည်လည်း2သစ်ကိုဂိမ်းကဆက်ပြောသည်:
- Crazy Chaos
ဦးနှောက်လေ့ကျင့်ရေးငျ: Right vs Left
29.59 ကို MB
Xbox Get လုပ်နည်း ...